Uncategorized Archives - Puntland Mirror Believable Media Website
September 10, 2021 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa maanta oo Jimce ah safar ku tagay magaalada Garacad halkaas uu ku kormeeray dhismaha dekada. Madaxweynaha ayaa kormeeray qeybaha kala duwan ee dhismaha dekadu ka socoto, […]
September 14, 2019 Puntland Mirror 0
Berbera-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in dowladiisu ay joojisay saldhiga milatariga ee Imaaraatka Carabta ay ka dhisanayeen magaalo xeebeedka Berbera. Isaga oo ka hadlayay Berbera maanta oo Sabti ah waxa uu […]
November 3, 2017 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Diyaarado dagaal oo aan la aqoon cida leh ayaa duqeeyay deegaanka Buqo ee gobolka Bari halkaas oo maleeshiyada ISIS ay ku leedahay saldhigyo, ilo-wareedyo katirsan Puntland ayaa u sheegay warsidaha Puntland Mirror. Duqaynta […]
July 15, 2017 Puntland Mirror 0
March 12, 2017 Puntland Mirror 0
The Investigation In the last three weeks, Puntland Mirror has been investigating allegations of serious irregularities, malpractice and corruption in Garowe City Tree Planting Project implemented by CARE international. The investigators have examined documents in […]
January 28, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
Ankara-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Boqortooyada Ingiriiska Theresa May ayaa maanta oo Sabti ah tagtay magaalada Ankara ee caasimada dalka Turkiga, halkaas oo ay kulan kula yeelatay madaxweynaha Turkiga. Sida ay ku warantay wakaalada wararka Turkiga ee […]
Sanadkii 1960 kii oo ahayd xilligii dalkeena Soomaaliya uu ka xorroobay labadii gumeyste ee kalaa ahaa Talyaani iyo Ingiiriis waxaa dhacday in habeenkii calanka la saarayey ay ahayd amin jaceylka iyo qiimaha xorriyadda ay qabeenkii [...]